Farmaajo oo wali wada fowdadii gobolka Gedo | KEYDMEDIA ENGLISH
Farmaajo oo wali wada fowdadii gobolka Gedo
Horraanba, Maamulka Juballand, gaar ahaa Guddiga SEIT ee heer Juballand, wuxuu soo saaray jadwalka doorashada 16-ka kursi ee loo raray Ceelwaaq, Madaxweyne ku xigeynka maamulkaas, ayaana sheegay in doorashooyin daah-furan dhici doonaan.
MUQDISHO, Soomaaliya – Sida ay Keydmedia Online hore u baahisay Kooxda waqtigu ka dhamaaday ayaa wali wadda isku dayo ay ku doonayaan in ay ku carqaladeeyaan dhameystirka doorashooyinka oo hadda maraya meel gabagabo ah.
Madaxweynihii hore Farmaajo, ayaa sanad iyo bar kadib wali ka tanaasulin qabyaaladeynta kuraasta taalla gobolka Gedo, wuxuuna shalay Garbahaarrey ka dajiyay xubno laga saaray FEIT, si ay doorashooyin is-bar-bar socda uga dhacaan gobolka.
Xubnaha tagay Garbahaarrey, ayaa ah kuwo uu bishii September 2020, Guddiga doorashooyinka ku daray Fahad Yaasiin, kuwaas ka yimid dhanka NISA, RW Rooble, ayaana intooda badan ka saaray Guddiga, kadib markii ay siyaasadda ku milmeen.
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal [FEIT] ayaa dhawaan ku dhawaaqay in degaan doorashada 2-aad ee Jubbaland, laga raray Garbahaarrey loona baddelay Ceel-waaq, iyagoo sheegay in caqabad amni ka jirto magaalada Garbahaarrey.
Guddigu, wuxuu maamulka Garbahaareey, ku eedeeyay in ay hor istaageen xubno ka socday Guddiga Doorashooyinka oo magaalada ku tagi lahaa booqasho loogu kuur galayay xaaladaha amni, si doorashadu uga dhacdo, taasoo keentay in laga guuro.
Guddoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Heer Federaal [GHDHF], iyo xubno uu hoggaaminayo ayaa ku sugan magaalada Kismaayo, si dhawaan loo soo gabagabeeyo doorashada Ceel-waaq, taasoo la filayo in ay dhawaan billaabato.
Sida ay KON, hore u tabisay Farmaajo, wuxuu 16 iyo 17 April 2022, kulamo la lahaa saraakiil ciidan, wuxuuna ku amray in ay is hor istaag ku sameeyaan doorashada Ceel-waaq, ciidankaas ayaa habeen ka hor weeray Guddoomiyihii hore ee Gobolka Mucalimuu.
Tan iyo markii uu Maxamed Cabdullahi Farmaajo, noqday Madaxweynaha Soomaaliya, horraantii 2017, gobolka Gedo ayaa ahaa caqabad gobol, [Juballand] iyo mid heer federal, taasoo unuggeedu yahay xasarad qabiil iyo damaca boob doorasho.
Madaxweynihii hore Farmaajo, iyo Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe, ayaa muddo dheer ku kala argti duwanaa doorashada 16-kaan kursi, waxaana qeyb ka ahaayeen caqabadihii dib u dhigay doorashooyinka muddada sanadka ka badan.
Guddigu Doorashooyinka, wuxuu sheegay in ay lama huraan tahay in 16 kursi la doorto, ka hor int aan loo dareerin doorashooyinka Guddoonka Golaha iyo Madaxweynaha, taasoo aan macquul ahayn, maadaama Guddoonka Golaha shacabka la dooranayo 27-ka bishaan.